रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - DocInformation ट्याब
तपाईँंले कागजातसूचना फाँटहरू समाविष्ट HTML कागजात निर्यात र आयात गर्दा, विशेष LibreOffice ढाँचाहरू प्रयोग हुन्छन।
लेखकको नाम घुसाउनुहोस्, र मिति, वा कागजात निर्माण गरिएको बेलाको समय.
लेखकको नाम र त्यो कागजात मुद्रण भएको मिति र समय घुसाउछ।
लेखकको नाम घुसाउनुहोस्, र मिति, वा अन्तिम बचतको समय.
हालको कागजातको संस्करण सङ्ख्या घुसाउनुहोस्
कागजात सम्पादनमा गरेको जम्मा समय घुसाउनुहोस्.
"सिर्जना गरिएको", "परिमार्जित", र "अन्तिम मुद्रण गरिएको" फाँट प्रकारहरूका लागि, तपाईँंले अनुरूप सञ्चालनको लेखक, मिति र समय सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।
निश्चित गरिएको सामग्री संगको फाँटहरू तपाईँंले यस्तै एउटा फाँट समाविष्ट एउटा टेम्प्लेट बाट एउटा नयाँ कागजात सिर्जना गरेपछि मात्र मुल्याङ्कन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, निश्चित सामग्री सहितको एउटा मिति फाँटले टेम्प्लेट बाट नयाँ कागजात सिर्जना गरिएको मिति घुसाउछ।
Title is: कागजात सूचना